Auto zvikamu Mould fekitori, vatengi - China Auto Zvikamu Mould Vagadziri
Suo repaneru muforoma inogadzira china
OEM Yakasarudzika auto musuwo paneli mould, auto zvikamu musuwo jekiseni muforoma mugadziri weChina. Zvinopfuura mazana mazana makumi mashanu emagetsi zvikamu zvinotumirwa kune dzimwe nyika dzinopfuura makumi maviri pagore, nezve musuwo wepaneru yeforoma mutengo, zvinhu, saizi, mifananidzo, fekitori, taura neyedu kuziva mo.
Auto chiridzwa bhodhi muforoma
Dashboard muforoma, Mota chiridzwa pani muforoma auto chiridzwa bhodhi muforoma mota dashibhodhi chivharo muforoma OEM
YeMotokari Grille Plastiki Injection Mould
Tikugashirei kuodha yakagadzirirwa Automobile Grille Plastiki Injection Mould, Mota Zvikamu Mberi Grille Grill Injection Mould.
Mberi uye kumashure auto bhamba bundu
Aojie Mould yanga ichipa kumberi auto bhamba muforoma, kumashure auto bhamba muforoma uye auto grill muforoma kune akasiyana auto vagadziri. Nekuvandudzwa kwechikumbiro chevatengi chepamusoro pemotokari bhamba, chimiro chechokunze chinobuda pamusoro hachigone kudikanwa kwemusika.
Auto Zvikamu Kukanda Mould
China mutengesi epurasitiki jekiseni muforoma yemota chikamu / auto zvikamu / kuumba epurasitiki mota zvikamu muforoma / Auto Zvikamu Mould Isu tiri rinotungamira sangano muindastiri kupa vatengi vedu mhando yeakanaka mhando yeAuto Zvikamu Kukanda Mould.
Auto Zvimwe Zvikamu Mould
Yemukati mekunze uye yekunze trim muforoma inogadzira OEM, Inopa mutsara wakazara wepurasitiki muforoma uye zvinhu zvekuumba zvemotokari nerori maererano nemhepo induction masystem, emvura manejimendi masisitimu, mafuta masystem, mota yekunze uye yemukati trim mafomu ehurongwa, kusanganisira zviridzwa mapaneru, bhamba, mota musuo muforoma